FARO icharatidzira kuona kwayo 3D tekinoroji ye geospatial uye kuvaka kuWorld Geospatial Forum 2020 - Geofumadas
Ndira, 2020 GPS / Equipment, Innovations
Kuti tiongorore kukosha kwehunyanzvi hwe geospatial tekinoroji mune yehupfumi hwehupfumi uye nekubatanidzwa kwayo nematekinoroji ari kubuda mumabasa akasiyana siyana, musangano wepagore weWorld Geospatial Forum uchaitwa muna Kubvumbi.
FARO, inovimbwa zvakanyanya sosi yeiyo chiyero che3D, imaging uye yekuziva tekinoroji, yasimbisa kutora chikamu kwayo muWorld Geospatial Forum 2020 seMubatsiri weKambani. Chiitiko ichi chichaitika kubva Kubvumbi 7 kusvika 9, 2020 kuTaets Art & Chiitiko Park, Amsterdam, The Netherlands.
FARO inounza njere uye yakakosha kukosha kune iyo yekuvaka uye geospatial zvikamu nemhinduro dzayo muDhijitari Kuvaka, Dhijitari Mapatya, Cloud Kubatana, Yakakwira-Yekukurumidza Reality Capture, uye nezvimwe. Vamiriri paWorld Geospatial Forum vachakwanisa kusangana nemhinduro idzi pamwe nemashandisirwo avo kuFOO yekuratidzira, pamwe nekutaura kwakasiyana pazvirongwa zveindasitiri.
"World Geospatial Forum ndiyo nzvimbo yekusangana nevatungamiriri vemafungiro uye ini ndichataura nezvezvazvino kuitika mugeoscience nekukomberedza digitizing mapurani ekuvaka, enjiniya nekuvaka," anodaro Andreas Gerster, Mutevedzeri weMutungamiri. YeGlobal Kutengesa kweBIM Kuvaka. "FARO anga ari mumwe wevanonyanya kukurudzira hunyanzvi kubvira pamazuva ekutanga edigitalization. IWorld Geospatial Forum inotigonesa kuburitsa akacheka-up hardware uye software mhinduro dzinoona kuti zviuru zvevatengi pasirese vanobatsirwa neepamusoro-chaiyo 3D dhata yekubata, nekukurumidza uye nyore kugadzirisa data, kuderedzwa kwepurojekiti mitengo uye kurerutsa marara uye kuwedzera purofiti. Tinotarisira kutaura kune vanenge varipo nezve bhizinesi rako uye nekukurukura kuti FARO ingakubatsira sei kugadzirisa kufamba kwako. ”
FARO yekuona ye 3D tekinoroji mhinduro anga ari makuru dhizaini yekuvaka, kuvaka uye mainjiniya (AEC) indasitiri kuWorld Geospatial Forum pamusoro pemakore. Hutungamiri hwekambani hwekufunga hahusi kungotyaira kugadziriswa kwehunyanzvi muAEC, asi zvave kuita mutyairi mukuru sezvo indasitiri ichienderera mberi ichienda kune digitization.
"Kubva makore mashoma apfuura, Geospatial Media yakanangana nekuvandudza huvepo hwedu mumusika weAEC, sezvo isu tichidavira kuti matekinoroji e geospatial ave kuita chinhu chakakosha muchikamu chino. Tinodada uye tinosungirwa kuramba tichitsigirwa neFARO pane zvese izvi uye tinotarisira kumwe kudyidzana kune zvibereko neFARO kuWorld Geospatial Forum gore rino, ”anodaro Anamika Das, Mutevedzeri weMutungamiri weBusiness Development and Outreach muGeospatial Media and Communications. .
FARO ® ndiyo inovimbwa kwazvo sosi yepasi kuyerwa kwe3D, imaging, uye kugona tekinoroji. Iyo kambani inovandudza uye inogadzira mamiriro-e-iyo-ekugadzirisa mhinduro inogonesa yakakwira-chaiyo 3D kutora, kuyera, uye kuongorora mune akasiyana maindasitiri, kusanganisira kugadzira, kuvaka, mainjiniya, uye ruzhinji chengetedzo. FARO inopa maAEC nyanzvi neakanakisa ekuongorora tekinoroji uye kunongedzera gore rinogadzira software rinovagonesa kuunza avo ekuvaka masayiti epanyama uye zvigadzirwa munyika yedhijitari (muzvikamu zvese zvehupenyu hwavo kutenderera). AEC vatengi vanobatsirwa neepamusoro-soro, yakazara data kutora, nekukurumidza mashandiro, kuderedzwa kwepurojekiti, kuderedzwa kwemarara, uye kuwedzera purofiti.
Nezve iyo Nyika Geospatial Foramu
World Geospatial foramu musangano wepagore wevanopfuura 1500 geospatial nyanzvi nevatungamiriri vanomiririra iyo yese geospatial ecosystem: ruzhinji gwara, mamepu emunyika masangano, akazvimirira chikamu makambani, multilateral uye budiriro masangano, sainzi uye zvedzidzo masangano, uye pamusoro pezvose , vashandisi vekupedzisira vehurumende, makambani uye mabasa evagari. Nedingindira rinoti 'Kuchinja Hupfumi mu5G Era - Iyo Geospatial Way', iyo yegumi nembiri yemusangano ichajekesa kukosha kweiyo geospatial tekinoroji mune yehupfumi dhijitari nekubatanidzwa kwayo neanobuda matekinoroji akadai se12G, AI, zvionera mota, Big Data, Cloud, IoT neLiDAR mumaindasitiri akasiyana siyana evashandisi, anosanganisira madhijitari, kuvaka neinjiniya, dziviriro uye chengetedzo, hurongwa hwepasi rose hwekusimudzira, kutaurirana, uye huchenjeri hwebhizinesi. Dzidza zvakawanda pamusoro pemusangano ku www.watspoppost.com
Iyi foramu ine mukurumbira ichawedzera ruzivo nezve chiyero uye zvakanakira geospatial matekinoroji uye ichapa mhinduro dzinoshanda uye dzinoshanda dzinobatsira mukuvandudza nzvimbo yakatikomberedza.
Previous Post«Previous Chii chinonzi isolines - mhando uye zvinoshandiswa
Next Post Dhijitari Twin - Philosophy yeiyo nyowani yedhijitari yekuchinjaNext »